भोलि सोमबारे र मातातीर्थ औंसीको दुर्लभ संयोग, उत्तम फल पाउन के गर्ने के नगर्ने ?, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
भोलि सोमबारे र मातातीर्थ औंसीको दुर्लभ संयोग, उत्तम फल पाउन के गर्ने के नगर्ने ?
काठमाडौं। अमावस्या अर्थात औंसीलाई त्यसै पनि पवित्र तिथी मानिन्छ । यो तिथीमा पितृको पूजा गरिन्छ जसबाट पितृदोष र कालसर्पदोषको शान्ति हुन्छ । भोलिको औंसीमा भने दुर्लभ संयोग परेको छ । भोलि मातातीर्थ औंसी हो र यही दिन सोमबार परेकोले सोमवती औंसीको पनि संयोग परेको छ । सोमबार औंसी वर्षमा केही पटक पर्छ तर देवनक्षत्र अश्विनी, बैशाख महिना र सोमवतीको संयोग भने निकै दुर्लभ हुन्छ जुन भोलि परेको छ । यो दिन गरिएका कार्यहरुको निकै विशिष्ट फल हुने शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ ।
सोमवती अमावस्यामा धान, पान, बेसार, सिन्दूर र सुपारीले पीपलको वृक्षको पुजा र परिक्रमा गरिन्छ । हर परिक्रमामा यीमध्ये कुनै एक चीज चढाउनुहोस् । त्यसपछि आफ्नो सामथ्र्यअनुसार फल, मिठाइ, खानेकुराहरु, सुहागका सामग्री कुनै मन्दिरका पुजारी वा गरिब ब्राह्मणलाई दान दिनुहोस् । यसका अलावा अन्य व्यक्तिहरुले बिहान सबेरै उठेर शिवजीलाई जल चढाउनुहोस् । गरिबलाई खानेकुरा दान गर्नुहोस् । पितृको पूजा गर्नुहोस् । दिवंगत पितृको लागि ब्राह्मण वा कुनै मन्दिरका पुजारीलाई भोजन गराउनुहोस् । गाई, कुकुर र कागलाई खाना खुवाउनुहोस् ।
यो औंसीमा मदिरा र मांसाहारबाट टाढै रहनुहोस् । शारीरिक सम्बन्ध नबनाउनुहोस् । कसैको जुठो भोजन नगर्नुहोस् । ननुहाइ नबस्नुहोस् । दाह्री, कपाल र नङ नकाट्नुहोस् । दिउँसोमा नसुत्नुहोस् र लसुन प्याजजस्ता तामसिक कुराहरु नखानुहोस् ।
कसरी गर्ने पितृदोष शान्ति ?
सोमबारे औंसीमा सूर्योदयभन्दा पहिल्यै पीपलको वृक्षमा जल र काँचो दूध चढाउँदा पितृदोषको शान्ति हुन्छ । सूर्योदयको समयमा कुनै नदीमा काँचो दूध र पानी मिलाएर बहाउँदा पनि पितृदोषको शान्ति हुन्छ । चाँदीको नाग नागिन बनाएर तिनको पूजा गर्नुहोस् । पूजा गरेपछि शिवलिंगमा चढाउने वा कुनै नदीमा बहाउने हो भने कालसर्पदोषको शान्ति हुन्छ । सेतो कपडाका चामल, सेतो मिठाइ, चाँदीको सिक्का र एक नरिवल राखेर आफैंलाई ७ पल्ट परिक्रमा गराएर नदीमा बहाउँदा पनि कालसर्पदोष शान्ति हुन्छ ।